Wararka Maanta: Sabti, July 6 , 2013-Dagaal Culus Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Xoogagga Al-shabaab ku dhexmaray Deegaanno ka Tirsan Bakool
Dagaalkan ayaa qarxay markii ciidamada dowladda Soomaalia ay weerar ku qaadeen deegaan ay ku suganayeen xoogag ka tisran Al-shabaab, waxaana uu dagaalkan socday muddo saacado ah.
“Ciidamada dowladda waxay weerar ku qaadeen kooxo ka tirsan Al-shabaab oo ku sugnaa deegaanka Jano-weyn oo 45-km u jira degmada Ceelbarde, waxaana halkaas kaga dilnay saddex qof oo mid ka mid ah uu dhaawac uga dhintay,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Mayow (Tall) oo warbaahinta la hadlay.
Dad ku sugan deegaannada lgu dagaalamay ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid culus ayna arkeen maydadka afar qof oo ka mid ah dhinacyadii uu dagaalku dhexmaray, inkastoo khasaaraha uu intaas ka badan karo.
Guddoomiyuhu wuxuu hadalkiisa raaciyay in qorshahoodu uu ahaa inay ka kiciyaan Al-shabaab deegaan biyo leh ayna u saaraan goobo oomanayaal ah taaska ay ku guuleysteen, wuxuuna xusay in ciidammo uu hoggaaminayo Sheekh Mukhtaar Rooboow oo uu khilaaf kala dhexeeyo hoggaamiyaha Al-shabaab uu ku sugan yahay deegaan ku dhow degmada Ceelbarde.
“Sheekh Mukhtaar iyo ciidmmo uu hoggaaminayo oo kasoo goostay kooxda Al-shabaab ayaa ku sugan gobolka, hadda wax dagaal ah oo naga dhexeeya ma jirto, waayo waxaa la yiri cadowgaada - cadowgiisa waa saaxiibkaa, ma jiro wadahadal na dhexmaray, balse waxaan qabnaa inaan dagaal kula jirno ciidamada Axmed Godane,” ayuu yiri Maxamed Cabdi Tall.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha gobolka Bakool wuxuu sheegay in dhowr jeer oo hore ay xoogagga Al-shabaab soo weerareen degmada Ceelbarde oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda, qorshahanna uu ahaa mid falalkaas looga hortagayo.